Aawey waalidkii dhaley caruurta dhagaxatuureysa? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aawey waalidkii dhaley caruurta dhagaxatuureysa?
"Waxaad moodaa in ilmaha ka awood badanyahiin hooyooyink & abaayaalka"
La daabacay torsdag 30 maj 2013 kl 14.33
Intii ay ka socdeen baabuur gubowga iyo dhagax ku tuurka booliska xaafaddaha ay ku badanyahiin dadka soogalootiga ah dalkaan Iswedhen, sida xaafadda Husby asbuucii la soo dhaafay, su’aalsha aadka layskaga weydiinayey aaladaha bulshada waxey aheyd: Aawey waalidkood ilamhaan baabburta gubaya, maa ceshadaan?
Hadaba kowsar Adan oo ah hooyo sadex caruur leh islamarkaan ah qannacsade talo ka siisa maamulada qaabka ugu haboon oo ay caruurta luuqadaha kala duwan ku hadla u baran karaan luqadooda iyo weliba qaabka ugu haboon oo ay waalidka caruurtood u barbarsan karaan. Taas oo u qabo waalid soomali ah, ayaa aaminsan in ay haboontahay in laysi su’aalo sababta ay waalidka dhaley caruurta dhagaxa tuurayo oo baabuurtana gubaya u ceshan-waayeen balse aymeesha ku jirto in la ogaado in ay jiraan waalid badan oo ilmo badan keligood korsada.
- Aniga sida ay ila tahay, Iswedhen waxaa ku badan waalid ilamaha kaligood korsada, badanaa hooyadaa ilmaha heysata amba abaabahaa ku keliya caruurta, taasna waxey keeneysaa stress amba xanuunyo faro badan, waxaa jira waalidyo aan shaqeynba oo caruurtii aan ogeyn.
Kowsar ayaa aaminsan in caruurta wadankaan lagu korinayo ay heysato xaalad qasnaan ah oo la xiriirta cida ay yahiin iyo halka ay ka soo jeedaan. Waxey aaminsantahay in korniimada ay caruurta guriga ka helaan iyo tan ay bulshada weynta ka helaan farqi weyn u dhaxeeyo taas oo caruurta u keenta jiho warer. Mar ay kowsar ka hadleysey soomaalida ah ee ay siiso casharada la xiriira qaabka ugu haboon ee caruurta loo korsado loona edabsado ayaa waxey sheegtey in inta badan waalidka soomaalida ah ay ilmahooda ka adagyahiin inta ay yar-yahiin balse qaar badan ku adkaadto in ay kontoroolshaan ilmahooda markey gaaraan da’da 13-14 sanno jirka, taas oo loo aaneyn karo ayey tiri in ay jiraan hooyin badan oo Soomaliyeed oo ilmaha korintooda ku keli noqda.
- Waxey soo yaro adkaaneysaa markey caruurta soo yaro weynaadaan oo ay 13-14 sanno iyo inta ka yaro sareysa noqdaan. Waayo markaa waxaad moodaa in ilmahii ka awood badanyahay waalidkii. Waxaana tan keeneysa hooyooyinkii baaa badanaa keli ku ah, malaha ninkii wey kalo tageen, amba aabahii mala joogo caruurtii o omarkaas ma heystaan qof ay ka baqdaan ama ay ixtiraamaan. Marka hadii hooyadii caruur faro badan heysato oo kelina ku tahay wey ku yaro adkaaneysaa in ay inan teenage ah ama inan teenage ah ka yaro adkaato, hadeynan aheyn hooyo go’aan adag leh, ayey tiri Kowsar Adan.
Fozi Saidi waxuu ka howlgala urur tacliimeed la yiraahdo Medborgerskolan, waxuuna aaminsanyahay in ay jirto faham xumo ka heystada waalidka soo galootiga cida masuulka ka ah ilmaha markey aysan guriga joogin.
Hadaba waalidka heysata caruurta aan weli qaan gaarin balse aan waxba ka maqneynin, halkee ayey caawinaad u doonan karaan. Kowsar Adan ayaa sharaxeysa.
- Waxey ilatahay is-faham la'aan baa jirta, waddamadii aan ka imaaney iskuulka ayaa ka masuul ahaa caruurta, laakiin halkaan adigaa ka masuul ah caruurta, ayuu yeri Fozi Saidi.
- Waxaa jirta caawino faro badan oo la heli karo amba kursas faro badan oo laga qayb geli karo. Waxaa lala xiriiri karaa degmada aad degantahay, xaruumaha caruurta, inkastoo loogu talo galey caruurta yaryar. Laakiin hadaad weydiisatid kursas faro badan mid la dhaho Komed waa la tagi karaa oo loogu talo galey waalidiinta heysata caruurta yaro waaweyn oo ayna ka adkeyn ilamhii aysan is fahmeynin oo dagaalka badanyahey. Kurs kaas oo kale waa laga qayb geli karaa. Waxaa lala xiriiri karaa ilamaha macallimiintiisa ama mentorkiisa ka masuulka ah.
- Ilmaha markuu yaryahey oo xanaanda barbarinta soo dhiganayaa ilaa inta ay ka weynaanayaan oo dugsi sare ka bilaabayaan waa in markasta hooyada xiriir wanaagsan la heysato macallimiinta caruurta ka masuulk ah oo wax kastoo ku soo kordha la socodsiiso, waayo macallimiinta ma oga waxa guriga ka dhacaya hadaan loo sheegin , waa in aad macllimiinta xiriir wanaasgan la heysatid kow, tan labaad hadii ay xaas tahay ninkeeda waa in ay caawinaad badan weydiisato waayo ilmaa meesha jooga ma ogtahay oo waa in ilmaha dantooda la eego markasta, hadii ay heysato ihel ama familj meesha u jooga waa in ay caawimo weydiisato, waa in ay dareento in aysan kaligeed aheyn oo culseyska oo dhan korka iska saarin. Waayo marka waxii oo dhan qarsatid hadhow mar un baa qarxeysaa. Badanaana ilmahaa meesha ku baaba’aya